Khipha umbhalo kuMfanekiso: Iindlela ezahlukeneyo zokuKhipha umbhalo kuMfanekiso | Creatives Online
Khupha okubhaliweyo kumfanekiso
Kule mihla, ngenxa yophuhliso oluchanekileyo lwetekhnoloji, senze ukuba kwenzeke kwaye kulula kakhulu ukusebenza ngeefomathi ezihlelekayo. Khupha okubhaliweyo kumfanekiso ibisoloko ingumsebenzi oye wabuzwa de kwaba ngumzuzu wokugqibela.
Okwakubonakala kungenakwenzeka kuye kwenzeka. Kule post, siza kukuntywilisela kwenye yezifundo apho uya kusebenza khona ngefomati eyaziwayo yeJPEG. Asikuphela nje ukuba siza kukwazisa ngale fomati, kodwa siza kuchaza indlela yokwenza esi senzo kwaye sizame ukwenza umsebenzi wakho ube lula ngoncedo oluncinci.
1 ifomathi yeJPG
1.1 IJPG okanye iJPEG
2 Indlela yokukhupha umbhalo kumfanekiso
3 Inyathelo 1: Layisha umfanekiso
4 Ii-aplikeshini zokuguqula umfanekiso ube ngumbhalo
4.2 Iilensi zeOfisi yeMicrosoft
4.4 I-Adobe Scan
4.6 Intsomi yokubhaliweyo (i-OCR Text Scanner)
4.7 Iskena sePDF
Ngokuqinisekileyo sele uvile malunga nale fomati, kwaye ukuba akunjalo, siya kukwazisa kwihlabathi layo ukuze uyazi kuqala, kwaye uqonde yonke inkqubo ezayo emva koko.
I-.JPG ifomathi luhlobo lwefayile efana ne PNG, TIFF, TXT njl. Umahluko phakathi kwazo zonke kukuba le fomati, Yifomathi esetyenziswa ngokubanzi kwiifayile zeefotoNgamanye amazwi, kubaluleke kakhulu kwinto esiyaziyo njengeshishini ledijithali. Ukuba uzinikela kwihlabathi lokufota, le fomati iya kuba liqabane lakho, kuba Ikhona kwizixhobo ezininzi: iikhamera, iimobiles, njl.
Igama lakhe ladalwa ngu Iqela leeNgcali zeFoto ezidityanelweyo, iqela leengcaphephe elakha i. jpg, .ifomati eyilelwe ucinezelo lwemifanekiso, zombini ngombala kunye negreyscale kunye nomgangatho ophezulu. Ke ngoko, sijongene neyona ndlela ixhaphakileyo xa sisenza ucinezelo lwemifanekiso yeefoto. Kakade ke, kufuneka kuqatshelwe ukuba iqondo lokunciphisa lingalungiswa, nto leyo khetha ubungakanani bogcino kunye nomgangatho womfanekiso. Ngokuqhelekileyo ifikelela kwi-compression enye ukuya kweshumi kunye nelahleko encinci ebonakalayo kumgangatho womfanekiso.
Ukuba yifayile esetyenziswa ngokubanzi, iye yaba yintsholongwane kwaye ithandwa kakhulu kwi-Intanethi. Olu setyenziso lukhulu lwefomathi luvumele iiphequluli ezininzi ukuba zibe nolu hlobo lwefomathi xa ukhuphela okanye uhlaziywa.
IJPG okanye iJPEG
Sithethile ngefomathi yeJPG kodwa hayi iJPEG, iyafana kodwa eneneni iqhelekile ukuyibhidanisa kwaye iyahlula. Nangona zisenokungabonakali zifana, zabelana ngezinto ezininzi ezifanayo, babelana ngokufana ngakumbi kuneyantlukwano.
Ezinye zezinto ezifanayo phakathi kwezi fayile zimbini zezi:
Zombini iifayile zikwifomathi yeraster endaweni yefomathi yevektha.
IJPG imele iJPEG kunye neQela leeNgcali zeeFoto eziHlangeneyo.
Zombini iintlobo zeefayile ziqhele ukusetyenziswa kwiifoto.
Zombini zisebenzisa inkqubo yoxinzelelo apho umphumo uhambelana nomgangatho.
Ekupheleni kwenkqubo yoxinzelelo, iifayile zincinci ngobukhulu.
Kodwa, banayo neyantlukwano encinci, ethi nangona ingachaphazeli omnye komnye, ichaphazele uphuhliso lwetekhnoloji. Umzekelo:
Iinguqulelo zangaphambili zeWindows, oko kukuthi, ezona nguqulelo zindala, inokuxhasa kuphela izandiso zeempawu ezi-3. Nangona namhlanje iinkqubo zeMac kunye neenguqulelo ezintsha zeWindows zinokuvula iifayile ngolwandiso lwe.jpeg, iikhompyutha ebezisetyenziswa ngaphambili ezinenkqubo yokusebenza yeWindows endala kuye kwafuneka ukuba zifinyeze ulwandiso ukuya .jpg
Ngoku, uninzi lweenkqubo zokwenziwa komfanekiso zisebenzisa i-.jpg ulwandiso ukunqanda ukubhideka. Ngokufutshane kunye nokushwankathela le ngongoma, umahluko phakathi kwezandiso ezimbini zefayile linani loonobumba. Namhlanje sinokusebenzisa i.jpeg ifomati yefayile. Nangona kunjalo, kwiinkqubo ezindala, bavumele kuphela i.jpg ifomathi.
Indlela yokukhupha umbhalo kumfanekiso
Elona nyathelo lilula lokuqhuba le nkqubo sebenzisa into esiyaziyo njengoGoogle Drive. Ukuba uneakhawunti kaGoogle, uya kuba nokufikelela kwesi sixhobo phakathi kwezicelo ezahlukeneyo uGoogle anazo.
Kule nkqubo, akuyi kuba yimfuneko ukuba kufakwe nantoni na. Okufuneka ukwenze kukuvula umfanekiso ngokungathi luxwebhu lokubhaliweyo. Kwaye xa usenza Google Docs Ayizukuvula nje uxwebhu lokubhaliweyo ngomfanekiso, kodwa izakuzama ukukhupha nokuba kuthini na okubhaliweyo enokukufumana kuyo. Oku kuzo zombini izikrini zephepha lewebhu kunye neefoto onokuzithumela ngaphandle ngokwasemzimbeni.
Nje ukuba unayo iGoogle Drive kunye nomfanekiso wakho ulungile, siqala ngesifundo.
Inyathelo 1: Layisha umfanekiso
Into yokuqala esiza kuyenza xa sele sinomfanekiso ulungile kwaye sivule iGoogle Drive, yile layisha ifoto oyifunayo kuGoogle Drive. Ungakwenza oku ngokuyilayisha kwiwebhu, okanye ngokwabelana ngayo ne-app ngokuthe ngqo kwiselfowuni yakho. Indlela ayinamsebenzi, layisha kuphela ifoto ofuna ukuyikhupha umbhalo wayo.
Okulandelayo, ngaphakathi kuGoogle Drive, kuya kufuneka ucofe kancinci ekunene kwifoto ofuna ukuyikhupha umbhalo wayo, ukukwazi ukuvula loo menyu yemeko apho ungajonga khona ukhetho. Ifoto inokuba yiyo nayiphi na ifomathi edumileyo exhaswa nguGoogle Drive.
Nje ukuba sicofe ekunene kumfanekiso, kwimenyu evulayo kufuneka ukhethe ukhetho lwe Vula nge. Oko kuya kuvula enye ifestile, apho kufuneka ukhethe i Google Documents ukhetho ukuvula umfanekiso ngesi sicelo somthonyama abanaso bonke abasebenzisi bakaGoogle Drive.
Nje ukusetyenziswa kwe Amaxwebhu kaGoogle qalisa, izakuvula umfanekiso ngaphakathi koxwebhu, kwaye ukuba ibona ukuba kukho okubhaliweyo kuyo, iyakuwukhuphela kumbhalo ongenanto., apho uya kuba nakho ukukhetha kwaye ukhuphele ngokuthanda kwakho ukuyikhupha ngendlela ofuna ngayo kakhulu.
Ii-aplikeshini zokuguqula umfanekiso ube ngumbhalo
Nazi ezinye izicelo ezinokukunceda:
Esi sixhobo idityaniswe neemveliso ezahlukeneyo zikaGoogle, kubandakanya neeFoto zikaGoogle, efakwe ngaphambili kwizixhobo ze-Android kwaye inokukhutshelwa, ngaphandle kwentlawulo kwi-Apple Store, kwii-iPhones. Ukuyisebenzisa, vula nje isixhobo Iifoto, kwaye emva koko ngenisa umfanekiso ofuna ukusebenza nawo kwaye yakube yenziwe, peyinta okubhaliweyo ukuze uwukhuphele kwaye emva koko uwuncamathisele kuxwebhu lwendawo.
ILens kaGoogle ikwaguqulela izicatshulwa, igcina ikhadi leshishini kubafowunelwa, kwaye yongeza imicimbi kwikhalenda, phakathi kwezinye izinto ezisebenzayo. I-app inokukhutshelwa ngokwahlukeneyo kwaye isetyenziswe ukuchonga izinto ezikummandla wokwenyani. Inkqubo iskena iipowusta, izikhumbuzo kunye neziza.
Iilensi zeOfisi yeMicrosoft
Le app yeMicrosoft ibhaqa umbhalo womfanekiso okhethiweyo kwaye emva koko velisa igama okanye inqaku elinye kwaye siyilayishe kwilifu le-OneDrive ukuze kamva, sikwazi ukufikelela kuyo kwisixhobo esiphathwayo okanye ikhompyuter. Ikwakuvumela ukuba ugcine umbhalo kwifomathi yePDF.
Esi sicelo, sifumaneka kuphela kwi-iPhone, ikuvumela ukuba uskene, ugcine kwaye wabelane ngamaxwebhu nge-pdf okanye ifomathi yejpg. Ukongeza, ezinjalo guqula ngokulula umfanekiso ube kumbhalo ngomsebenzi we-OCR, ikuvumela ukuba ukhuphe ngokulula kwaye uhlele umbhalo kwifoto yakho. Esi sikena sokubhaliweyo sibona iilwimi ezininzi.
Ikuvumela ukuba uskene izicatshulwa kwaye uvelise iPDF okanye ukhuphe isicatshulwa kumfanekiso owenziweyo. Xa ibhaqa iifom, ikuvumela ukuba uzigqibezele.
Liphepha eliguqula okubhaliweyo ukusuka kwimifanekiso ukuya kwisicatshulwa esicacileyo kwimizuzwana embalwa. Okokuqala kufuneka ulayishe ifoto, emva koko ukhethe ulwimi lokubhaliweyo kwaye ekugqibeleni ifomathi ofuna ukuba uxwebhu luvele ngayo.
Intsomi yokubhaliweyo (i-OCR Text Scanner)
Ukuguqula umfanekiso ube kumbhalo, ikuvumela ukuba uhlele umxholo kunye nokukopa kwaye uncamathisele kwezinye usetyenziso. Eli qonga libona okubhalwe kwiilwimi ezingaphezu kwama-50.
Esi sicelo sikuvumela ukuba uskene amaxwebhu kunye nokuguqula iifoto zibe umbhalo. Isetyenziselwa ukuskena, ukugcina kunye nokwabelana ngalo naluphi na uxwebhu PDF, JPG okanye TXT. Ikwanenketho yokongeza umsayino wedijithali kumaxwebhu.
Ngophuhliso kunye nokudalwa kwezicelo ezininzi, ukufikelela ekukwazi ukwenza olu hlobo lwenkqubo yekhompyutheni kube lula. Ukukhupha isicatshulwa kumfanekiso, namhlanje kuye kwaba ngumsebenzi olula kwaye ufikeleleke kuzo zonke iintlobo zoluntu. Kwakhona, ukuba inkqubo esiyibonisileyo ayigqibanga ukukukholisa, Ungasoloko usebenzisa izixhobo esizicebisile ekupheleni kwesi sithuba.
Zizicelo ezininzi zazo zisimahla kwaye ziyafumaneka kuzo zombini iinkqubo ze-Android kunye ne-Apple. Kufuneka nje ucofe kwaye uzikhuphele. Ukuba unayo i-akhawunti kaGoogle, unako ukufikelela kwizicelo zayo ezininzi apho ezinye zazo ziye zenzelwe olu hlobo lomsebenzi.
Ngamafutshane, ukukhupha isicatshulwa kumfanekiso yinto esele yenziwe kwaye isesandleni sethu, zombini kwinguqulelo yeselula yesicelo nakwamanye amaqonga apho esi sixhobo sisetyenziswa khona. Ngoku lixesha lokuba uzame izixhobo kwaye ufumane ezinye ezinokukunceda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Khupha okubhaliweyo kumfanekiso
Icons kunye nentsingiselo yazo